माफ गर्नुहोस् Disqus, म अब फ्यान हुँ! | Martech Zone
माफ गर्नुहोस् Disqus, म अब फ्यान हुँ!
मङ्गलबार, जुन 16, 2009 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
करीव एक बर्ष पहिले, केहि टिप्पणी प्रणाली पप अप भयो - SezWho सहित, तीव्र बहस र Disqus। म थियो जबरजस्ती विरुद्ध सबै SezWho पछि अरूले जाभास्क्रिप्ट मार्फत टिप्पणीहरू लोड गर्‍यो र टिप्पणीहरू स्थानीय रूपमा बचत गरेन
जाभास्क्रिप्टको साथ समस्या यो छ कि यो ब्राउजरमा लोड गरिएको छ, सर्भरमा होइन ... त्यसैले जब खोजी ईन्जिनले पृष्ठ क्रल गर्‍यो, यसमा टिप्पणीहरू भएता पनि यो अपरिवर्तित देखिनेछ। एक बर्ष पछि र ल्यान्डस्केप एकदम थोरै परिवर्तन भएको छ ... सेजW जुन व्यवसायबाट बाहिर छ, IntenseDebate Automattic, WordPress 'प्यारेन्ट कम्पनी द्वारा खरिद गरिएको थियो, र Disqus ले लोकप्रियतामा बढिरहेको छ। Disqus ले यसको कार्यविधिहरू पनि परिवर्तन गर्‍यो - अब तिनीहरू समक्रमण र टिप्पणी सर्वर साइड पनि प्रदर्शन गर्दछन्।
यी सबै मुद्दाहरूको अब समाधान भएको छ, र डिस्कसको बढ्दो प्रकार्य र सामाजिक मिडियामा एकीकरणको साथ, यसले वास्तवमै वर्डप्रेस ब्लगरहरूलाई प्लगइन स्थापना गर्न र सेवा एकीकृत गर्न धेरै अर्थ राख्दछ। मैले IntenseDebate को प्रयास गरेको छैन, न त मैले यसका बारे धेरै समाचारहरू वा धर्मपुत्रा देखेको छु ... कसैले यसको प्रयोग गरिरहेको छ?
डिस्कसका दयालु व्यक्तिहरूले मलाई मेरो ब्लगको सामग्री र टिप्पणीहरू एक्सएमएल मार्फत निर्यात गर्न र उनीहरूको समर्थन टीममा अपलोड गर्न अनुमति दिए। तिनीहरू अब मेरो ब्लगबाट सबै पुराना टिप्पणीहरू उनीहरूको ईन्जिनमा सारिरहेका छन्। धेरै राम्रो!
त्यसो भएमा ... डिस्कसका चालक दललाई, म तपाईको निवेदन एक असफल ग्रेड दिदै माफी माग्नु पर्छ। यद्यपि यो समयमा गर्नु ठीक कुरा थियो, म अब प्रशंसक हुँ! तपाइँसँग एक शानदार उत्पाद छ र मलाई ट्विटर एकीकरण मन पर्छ!
टैग: टिप्पणी प्रणालीटिप्पणी प्रणालीDisqus
मार्केटिंग टेक्नोलोजीमा ग्याप?
चितुवाको सफारीमा तपाईको खोज इञ्जिन परिवर्तन गर्नुहोस्
जुन 16, 2009 मा 10: 06 PM
मलाई वास्तवमा डिस्कसको साथ केही समस्याहरू थिए, तर सिद्धान्तमा यो एक राम्रो प्लगइन हो। मलाई मनपर्‍यो कि उनीहरूले मलाई कसरी ईमेल पठाए जब कसैले टिप्पणी गरे, तर समग्रमा प्रणालीले मेरो लागि काम गरेन। SezWho को लागि लिने प्रणालीको बारेमा तपाइँ के सोच्नुहुन्छ?
जुन 16, 2009 मा 6: 15 PM
खुशी छ म मद्दत गर्न सक्छ =) मलाई पिंग गर्न स्वतन्त्र महसूस गर्नुहोस् यदि तपाईंलाई अरू केहि चाहिएमा।
म उही डु boat्गामा थिएँ, वर्डप्रेसबाट केवल डिस्कसमा गएँ तर समान समस्याहरू थिए त्यसैले ईन्टेनसेबेटको लागि र अब फेरि डिस्कसको प्रयास गर्दै किनभने आईडी सबै प्रकारका बग्गी थियो।
मेरो डिस्कोसमा सबैले उस्तै समस्या भएको जस्तो देखिन्छ WordPress २.2.8.4..XNUMX को साथ, टिप्पणीहरू आयात गर्दैन।
मँ यो बन्द गर्न र केहि अरू पाउन को लागी जाँदैछु…। फेरी?
मैले सहमत गर्नुपर्दछ - फ्लोपी स्ट्रिप्स अफ कागज कपाल डोएएक्स २ मा थोरै फोहोर नै थियो।
अक्टूबर २१, २०१ at २:०14 बिहान
डिस्कसको साथ यो धेरै उत्कृष्ट पोस्ट हो
अक्टूबर २०, २०१ at २:30० अपराह्न
निस्सन्देह डिस्कस एक सब भन्दा द्रुत बृद्धि भइरहेको टिप्पणी प्रणाली हो। म जाभास्क्रिप्ट र सबै अन्य टिप्पणीहरूको बारेमा तपाइँको विचार स्वीकार गर्दछु, तर मलाई लाग्छ कि टिप्पणीको लागि लग इन हुनु पर्ने आवश्यकता अलि कष्टकर छ। तिम्रो के बिचार छ ?
मलाई लाग्छ यो बेकार छ कि स्प्यामरले उद्योगलाई यति नराम्रो रूपमा नियन्त्रणमा लिएको छ कि हामीलाई लगइनहरू जस्तो स्थानमा उपायहरू हुनु आवश्यक छ; जहाँसम्म, व्यापार साइटहरूका लागि - यसले अर्थ बनाउँदछ र सम्भावनाहरूमा केही जानकारी स collecting्कलन गर्ने उत्तम तरिका हो।
डिसे 19, 2013 मा 9: 29 AM
तपाइँ "स्प्याम" को मतलब के हो?
जनवरी 1, 2012 मा 9: 44 एएम
मलाई डिस्कस मन पर्छ, स्थापना गर्न धेरै सरल र प्रयोग गर्न सजिलो। लगइनहरू हुनु आवश्यक भएको बारेमा डगलससँग सहमत हुनुहोस्, लगइन गर्नका लागि कम्तिमा त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन्, गुगल, याहू, फेसबुक, ट्विटर आदि।
फेब्रुअरी १,, २०११ 22:१:2012 अपराह्न
म यो मात्र हराउँछु। यो प्रयोग गर्न धेरै उपयोगी छ।
मार्स 26, 2012 मा 11: 44 एएम
यसमा छलफल गर्न समय निकाल्नु भएकोमा धन्यवाद, म दृढताका साथ महसुस गर्छु
यसको बारेमा र यस विषयमा बढि जान्न मनपर्दछ। यदि सम्भव छ भने, तपाईं प्राप्त रूपमा
विशेषज्ञता, के तपाइँ अधिक जानकारीको साथ तपाइँको ब्लग अपडेट गर्न मनमा गर्नुहुन्छ? यो छ
मेरो लागि धेरै सहयोगी।
अप्रिल 18, 2012 मा 6: 58 एएम
मलाईँ मन पर्दछ कि सामाजिक डिस्कोस कती सामाजिक छ! मैले सोच्न सक्ने प्रायः कुनै पनि "शुद्ध" कमेन्टि than सिस्टम भन्दा सामाजिक प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ।
नोभेम्बर २०, २००। 16::2012 अपराह्न
Disqus गजबको छ !!
मार्स 5, 2014 मा 9: 05 एएम
यकिन छैन यदि यो सब भन्दा राम्रो कमेन्टिंग प्लेटफर्म हो, तर डिस्कस वास्तवमै गत बर्ष वा दुई बर्ष मा एकदम छिटो बढेको छ।
मार्स 5, 2014 मा 9: 13 एएम
प्लगइन प्रयोग गर्न प्रलोभनमा, तर अहिलेको रूपमा होल्ड गर्दै। पहिले नै धेरै प्लगइनहरू, FB टिप्पणीहरूको लागि एक सहित।